China Japanese n'ihi 18L cheetainer akpa na igbe ụlọ ọrụ na suppliers | Kaiguan
Akpa obi ụtọ a n'ime igbe bụ ewu ewu maka imeju lita 18. Ọ bụ akpa ọhụrụ nke na-ejikọta mgbanwe nke akpa na nkwakọ ngwaahịa na uru dị mma nke ihe siri ike ma ọ bụ nke siri ike, nke na-eme ka ọ bụrụ nhọrọ zuru oke na nhọrọ ndị a niile. Ọ nwere akpa rọba nke nwere ụdị cube, ọtụtụ oyi akwa, mgbata, okpu ma ọ bụ valvụ na igbe kaadiboodu.
Akpa Cheertainer na igbe 18 lita bụ nke plastik multilayer mere. Igwe dị n'elu (polyamide + polyethylene) na-echebe site na ikuku oxygen na mmiri; njupụta ya na ihe mejupụtara ya nwere ike ịdị iche dabere na mkpa nke onye ahịa ma ọ bụ ngwaahịa. Igwe dị n'ime (polyethylene) na-agbanwe ma na-eguzogide ịdọkasị ahụ.
Gụnyere lita 18, a na-ejikwa ndị na-aṅụrị ọṅụ maka mmiri mmiri na mmiri viscous ndị ọzọ.
Cheertainer anyị abụghị igbe n'ime akpa gị. Ọ na-enye ndị ahịa ihe ngwungwu imewe nke na-arụ ọrụ ohiri isi na-ekesa na iji. Emepụtara ka ọ bụrụ ụdị igbe, Cheertainer nwere ikike pụrụ iche n'ichepụta ya na ihe owuwu ya. Emepụtara ya na gussets n'akụkụ nke "ụdị dabara adaba" na akpa ahụ, Cheertainer na-enye ohere maka nnyefe zuru oke n'efu.
Nke gara aga: Collapsible 5 lita ultrasound gel cubitainer
Osote: Akpa ncha mmiri mmiri na ncha ntutu n'ime igbe
Akpa Cubitainer n'ime igbe maka Adblue